आरोहअवरोहका साथ विकास भएको नेपालको इतिहास अहिले समृद्धितिर उन्मुख भएको कथाका साथ ‘नेपाल गाथा’ गीतिनाटक सोमबार राष्ट्रिय नाचघरमा प्रस्तुत गरियो । साहित्यकार तथा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली ‘शीतविन्दु’को लेखन र प्राज्ञ डा. देवी नेपालको सहलेखनमा प्रस्तुत ऐतिहासिक गीतिनाटक नेपालको गीतिनाटकको इतिहासमा कोशेढुङ्गा भएको छ ।
बुटवलमा भेटिएको तीन हजार एक सय वर्ष पुरानो रामापिथेकसको कङ्कालबाट नै इतिहास सुरु भएको अनुमान गरिएको छ । लिच्छविकालदेखि लिखित इतिहास भेटिए पनि त्यसभन्दा अघि गोपाल र किराँतले शासन गरेको पनि पाइएको छ । लिच्छविकालमा बनेको कैलाशकूट भवन एकदमै भव्य रहेको इतिहासमा उल्लेख भए पनि कहाँ थियो भन्ने भग्नावशेष भेटिँदैन ।
लिच्छवीकालमा विभिन्न कला संस्कृतिको विकास भएको थियो । त्यसपछि मल्लले नेपाली कला संस्कृतिलाई उचाइ थप्ने काम गरे ।
गोरखाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले अङ्ग्रेजको आक्रमणबाट देशलाई जोगाउन राज्य एकीकरण हुनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेका थिए । उनले नेपालमण्डल, बाइसे-चौबीसे, चौदण्डी, मकवानपुर आदिमा विभक्त नेपाललाई एकीकरण गरेका थिए । उनको एकीकरणको कामलाई उनका छोरानातिले पनि निरन्तरता दिएका थिए । बलभद्र कुँवर, भक्ति थापालगायत योद्धाले सो समयमा राज्य एकीकरणमा योगदान पुर्‍याएका थिए । त्यसपछि कोतपर्वका साथ राणाकाल सुरु भयो :
राणाकालमा जनताले कहिल्यै स्वतन्त्रताको अनुभूत गर्न पाएनन् । राणाले जे भन्छन्, सोही अनुरूप नै जनता चल्नुपर्थ्यो । ‘मकैको खेती’ नामक पुस्तक लेखेकै कारण कृष्णलाल अधिकारीलाई राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशम्शेरले कारागारमा सडाए । राणाकालको अन्त्यका लागि योगमायाको सुधार अभियान पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । आफ्नो अडानलाई नमानेपछि उनले आफ्ना अनुयायीसहित जलसमाधि लिएकी थिइन् । राणाशासनको ज्यादती बढी भएपछि धर्मभक्त माथेमा, गङ्गालाल श्रेष्ठ, शुक्रराज शास्त्री र दशरथ चन्द आदिले पनि शहादत दिए ।
वि.सं. २००७ मा १०४ वर्षीय राणाशासनको अन्त्य भई प्रजातन्त्रको स्थापना भएपछि जनताले स्वतन्त्र भई बाँच्न थालेका थिए । वि.सं. २०१५ को आमनिर्वाचनपछि वीपी कोइराला प्रधानमन्त्री भएपछि जनतामा थप उत्साह बढे पनि त्यो धेरै समय टिक्न सकेन । २०१७ पुस १ गते प्रजातन्त्रको हत्या गरी राजा महेन्द्रले राज्यको सम्पूर्ण शक्ति आफ्नै हातमा लिई निर्दलीयता चलाए । राजनीतिक सङ्गठन गर्न पाइन्नथ्यो । त्यसै क्रममा २०२९ सालमा भएको झापा आन्दोलनलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा लिने गरिन्छ । त्यसपछि किसानले पनि आन्दोलन गरे ।
पञ्चायतको उत्कर्षपछि २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि संसदीय बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएको थियो । सोही कालमा उदीयमान नेकपा (एमाले)का तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारी र सङ्गठक जीवराज आश्रितको दासढु‌ंगा दुर्घटनामा निधन भयो :
त्रिशूलीभन्दा ठूलो भो भेल जनताको आँसुको
देशका वैरी हाँस्दै छन् आज अन्त्य भो खुसीको ।
संसदीय व्यवस्था परम्परागत ढङ्गले चल्दै गर्दा तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)ले भूमिगत भएर सशस्त्र युद्ध थाल्यो । यहीबीच राजा ज्ञानेन्द्रले शासन हातमा लिएपछि सात राजनीतिक दल र माओवादी मिलेर २०६२/०६३ को आन्दोलनको नेतृत्व गरे । द्वन्दकाल र जनआन्दोलनमा हजारौंँ जनताको ज्यान गएको थियो । दोस्रो जनआन्दोलनको उपज देशमा लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्र स्थापना भयो । २०७२ मा गएको भूकम्प नेपालको राजनीतिमा एक अर्काे कोशेढुङ्गा भयो :
हे धर्ती माता ! के भयो तिम्लाई काँपेको काँप्यै छ्यौ ?
नाटकमा देशको भाषा, संस्कृति, रहनसहन र कला आदिलाई समेट्ने प्रयत्न गरिएको थियो । कुन समयमा जनताले कस्तो अनुभव गरेका थिए भन्ने भावलाई सोही नाटकमार्फत् चित्रण गर्न खोजिएको थियो । नाटकमा वास्तविकता प्रस्तुत गर्ने किसिमबाट सन्दर्भ सुहाउने तस्बीर र छायाङ्कनसमेत देखाइएको थियो । प्राज्ञ अशोक राईले १६ दिनमै रातबिहान नभनी पूर्वेली, सङ्गिनी, पालम, साकेला, भोजपुरी, नेवारी, सेलो, सालैजो, डेउडा, हुडकेली लय, हिमाली लय, भजन र रागमा आधारित आधुनिक सङ्गीत नाटकमा प्रयोग गरेका थिए ।
नाटकका रचनाकार शीतविन्दु विगतको इतिहासलाई बिर्सिएमा भविष्य नबन्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, 'इतिहास बिर्सने राष्ट्रको भविष्य सम्भव छैन ।'
गीतिनाटकको निर्देशन वीरेन्द्र हमालले गरेका थिए । नाटकमा नृत्य निर्देशन गोरन चौधरी र सहनृत्य सवनम सिलवालको थियो ।